မင်ျဂလာဆောငျအတှကျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ထကျဝကျနီးပါး ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခနြိုငျခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ။ – SoShwe
Home/LifeStyle/မင်ျဂလာဆောငျအတှကျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ထကျဝကျနီးပါး ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခနြိုငျခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ။
မင်ျဂလာဆောငျအတှကျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ထကျဝကျနီးပါး ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခနြိုငျခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ။
admin March 8, 2022	LifeStyle Leaveacomment
နီယာမာလို့ချေါတဲ့ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ ရဲအရာရှိအမြိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ မင်ျဂလာဆောငျအတှကျ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခရြာမှာ ထကျဝကျနီးပါး ကဆြငျးအောငျ လြှော့ခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။ နီယာမာရဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျဟာ သူမတက်ကသိုလျမှ ဘှဲ့ရပွီးနောကျ ၁၉ စတုနျအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ နီယာမာဟာ “ ကြှနျမ အသကျ ၂၁ နှဈအရှယျတုနျးကဆိုရငျ ကားထဲဝငျထိုငျဖို့အတှကျ တျောတျော ကွိုးစားခဲ့ရပါတယျ . . .” ဆိုပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ဆကျလကျပွီး သူမကပဲ “ ကြှနျမအနနေဲ့ လယောဉျစီးမယျဆိုရငျ လယောဉျပျေါမှာရှိတဲ့ ခါးပတျနဲ့ အဆငျမပွလေို့ အပိုထပျဆောငျး ယူသှားရပါတယျ။ ပနျးခွံထဲကို လမျးလြှောကျထှကျခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေလညျး ကြှနျမအတှကျ အိပျမကျဆိုးလို ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ တဈခါတဈရံကရြငျလညျး ခွထေောကျနှဈဖကျစလုံးဟာ ရောငျရမျးပွီး ဖောငျးကားနလေို့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျတောငျ လမျးလြှောကျလို့မရပါဘူး။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Roller Coaster စီးတုနျးကလညျး ကြှနျမခန်ဓာကိုယျကွောငျ့ စီးနငျးခှငျ့ မရခဲ့ပါဘူး . . . ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ခံစားခကျြတှကေို UNILAD သို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
#facetofacefriday9stone down and some cheeky Botox and lip filler along the way 👄 Anddddd I don’t try and hide myself with my hair anymore!
A couple of stone into my slimming world journey vsacouple of weeks ago ❤️ I was probably about 17 stone in the first photo, so around2stone down into my slimming world journey! . . . . . Harry Potter always playedahuge part of my relationship. The reason why I think that Harry Potter has always played suchahuge part in my life was because of escapism because when you watch/ read Harry Potter you arnt in this world. I genuinely believe I used Harry Potter for escapism because I wasn’t happy. . . . . The first photo was my second trip to the Harry Potter studios! I was feeling more body confident and 100 times better in myself, the second photo wasafew weeks ago feeling 100 times better than the first photo and more confident again and less embarrassed for what people thought of me! 😃 #Slimmingworlduk #weightloss #slimmingworldfamily #weightlossjourney #slimmingworldjourney #healthyeating #swfamily #motivation #slimmingworldmeals #slimmingworldsupport #weightlossmotivation #slimmingworldfriends #slimmingworldmafia #weightlosstransformation #bodytransformation #slimmingworld #slimmingworldjourney #facetofacefriday @slimmerdownunder
၂၀၁၅ ခုနှဈမှစ၍ သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးအောငျ အသညျးအသနျ ကွိုးစားခဲ့ပွီး ၂၀၁၆ ဒီဇငျဘာမှာတော့ သူမရဲ့အဝတျအစားဆိုဒျဟာ ၂၂ ကနေ ၁၀ အထိ ကဆြငျးခဲ့ကာ သူမဖွဈခငျြနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားအတိုငျးရရှိအောငျ ကွိုးစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Soo! In October we had our dream wedding! It wasaHarry Potter wedding! We were fortunate enough to make it on the radio and daily mail with our wedding! 😍 but just had the photos come through from our photographer! . . Without slimming world I would never have had the confidence to have my dream wedding and my dream dress😍 #Slimmingworlduk #weightloss #slimmingworldfamily #weightlossjourney #slimmingworldjourney #healthyeating #swfamily #motivation #slimmingworldmeals #slimmingworldsupport #weightlossmotivation #slimmingworldfriends #slimmingworldmafia #weightlosstransformation #bodytransformation #slimmingworld #slimmingworldjourney #diet #losingweight #slimmingworldinspiration #harrypotter #harrypotterwedding #themedwedding #nerd #wedding @jennyandgerrys
#throwbackthursday throw back to the picture on the left, where I physically couldn’t walk anymore because my feet were so swollen. I was 19 stone /120kilos extremely over weight, withaBMI of 45. . . I had to get an extra seat belt for the plane, I couldn’t fit on the roller coasters or when I did I was put in the ‘fat seat’ . . Throw back toatime where I had paranoia and anxiety that people were starring at me. . . Throw back to when I was very nearly diabetic. .3years on, ( two years at target) I’m half the person I was ( literally) I’m so much healthier/ happier than I thought I ever could be. . . I have my dream career, dream house, the best husband and imasize 10, all things I would quite literally have dreamt about. . So here’s to 2019 another year, forever thankful to slimming world 🌍 #weightlossjourney #weightlosstransformation #transformationtuesday #slimmingworldfamily #weightlossjourney #slimmingworldjourney #healthyeating #swfamily #motivation #slimmingworldmeals #slimmingworldsupport #weightlossmotivation #slimmingworldfriends #slimmingworldmafia #weightlosstransformation #bodytransformation #slimmingworld #slimmingworldjourney #diet #losingweight #slimmingworldinspiration #food
မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါး ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ။
နီယာမာလို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ရဲအရာရှိအမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရာမှာ ထက်ဝက်နီးပါး ကျဆင်းအောင် လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နီယာမာရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ သူမတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ၁၉ စတုန်အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ နီယာမာဟာ “ ကျွန်မ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တုန်းကဆိုရင် ကားထဲဝင်ထိုင်ဖို့အတွက် တော်တော် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ် . . .” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သူမကပဲ “ ကျွန်မအနေနဲ့ လေယာဉ်စီးမယ်ဆိုရင် လေယာဉ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ခါးပတ်နဲ့ အဆင်မပြေလို့ အပိုထပ်ဆောင်း ယူသွားရပါတယ်။ ပန်းခြံထဲကို လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကလည်း ကျွန်မအတွက် အိပ်မက်ဆိုးလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျရင်လည်း ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာ ရောင်ရမ်းပြီး ဖောင်းကားနေလို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင် လမ်းလျှောက်လို့မရပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Roller Coaster စီးတုန်းကလည်း ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် စီးနင်းခွင့် မရခဲ့ပါဘူး . . . ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို UNILAD သို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းအောင် အသည်းအသန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာမှာတော့ သူမရဲ့အဝတ်အစားဆိုဒ်ဟာ ၂၂ ကနေ ၁၀ အထိ ကျဆင်းခဲ့ကာ သူမဖြစ်ချင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအတိုင်းရရှိအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Previous ကွညျ့ရှုသူတိုငျးကို စိတျပကျြစနေိုငျသလို ရယျမောမှုလညျး ပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ဓာတျပုံလေးမြား။
Next နံနံပငျရဲ့ အကြိူးအာနိသငျမြား။